U-Huawei uza kuzisa i-Mate 20 kunye ne-Mate 20 Pro ngo-Okthobha u-16 eLondon | I-Androidsis
Ngomboniso wangoku we Huawei Mate 20 Lite ukuba le nkampani yenziwe namhlanje, Inkampani esekwe e-China isandula ukubhengeza uthotho lwe-Mate 20. Oku kwenziwe ngengxelo eyenze yacaca kwiposta esemthethweni, nalapho kuye kwatyhilwa ukuba umcimbi uzakubanjelwa phi kwaye ngaluphi usuku.
Nangona zombini iiterminal bekulindeleke ukuba zifike ubuncinci ngo-Okthobha, amanye amarhe adlulileyo abonise ukuba azakwenziwa ngoNovemba okanye ngoDisemba, into engasayi kuba njalo.
Ngokwento epapashwe yinkampani, I-Mate 20 kunye neMate 20 Pro ziya kwenziwa ngokusemthethweni ngo-Okthobha 16 eLondon. Kukho iinkcukacha zobuchwephesha, iimpawu kunye nexabiso, kunye nazo zonke iinkcukacha ezinokubakho, malunga neefowuni zombini ziya kubhengezwa.
Ukusukela ukuba uHuawei wazise eyona processor yakhe inamandla, Kirin 980, kuye kwaqinisekiswa ukuba Ezi fowuni zimbini ziya kuba ziifowuni zokuqala ukuphatha iprosesa ye-7 nm. Oku kusengqiqweni kakhulu ukuba sithathela ingqalelo ukuba ayikho enye i-chipset yefowuni yohlobo olunye emhlabeni.
Ukucaciswa kwe-Mate 20 avuza kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ngokwento ebonisiweyo, iza nescreen se-AMOLED esi-6.3-intshi esine-notch "yamanzi" kunye nesisombululo se-FullHD + se-2.244 x 1080. Kuya kubakho iikhamera ezintathu ngasemva, ngokunjalo nakw Huawei P20 Pro, kodwa baya kuba nesimo esahlukileyo, ke yonke into ishiywe kulindelo.
Kwelinye icala, ngokubhekisele kwi-Mate 20 Pro, ukuvuza kuphakamisa ukuba kuya kuba ne-6 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yendawo yokugcina yangaphakathi, nangona kulindeleke ukuba ize ne-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yeROM. Bakwasixelela ukuba iza kuza nebhetri ye-4.200mAh, ibale i-Android 9.0 Pie ngaphandle kwebhokisi, kunye nenkxaso yokutshaja ngaphandle kwamacingo.
Ekugqibeleni, Zombini ezi zixhobo kulindeleke ukuba zize nophuculo kwicandelo lobukrelekrele bokuzenzela kwaye zininzi izinto ezintsha esiza kuthi sazi ngazo. Ukwenza oku, kufuneka silinde malunga nenyanga enesiqingatha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Igosa: IHuawei izakuveza iMate 20 nge-16 ka-Okthobha eLondon
Isidlali seVidiyo seNova, isidlali somculo esivulekileyo somgangatho kwifowuni yakho okanye kwi-Android TV